အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၅
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၅
Posted by kai on Jul 15, 2015 in Editor's Notes, Myanmar Gazette |6comments
ရတနာခုနှစ်သွယ် တကယ်ပင်စုံညီ၊ တို့အမျိုးသားတိုင်းပြည်)
(မွဲတဲ့လူ လှူဒါန်းနိုင်မည်၊ ကျောင်းဆောက်ကာ ဘုရားပါတည်၊
ဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏတို့ မတဲ့ကိန်းဆိုက်ပြီ။)]
မြန်မာပြည်တွင် တရက်အနည်းဆုံးပေးရမည့်လုပ်အားခငွေကို ၃၆၀၀ကျပ် သို့ဇွန်လကုန်ကတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြသည်။
အမေရိကပြည်၏ ဖယ်ဒရယ်မှ သတ်မှတ်ထားသော (အနည်းဆုံး)တနာရီဝင်ငွေသည်ကား ၇.၂၅ဒေါ်လာ၊ ဗမာကျပ်ငွေ၉ထောင်မျှရှိပါသည်။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သည် အမျိုးသားကုန်ထုတ်လုပ်မှု(GDP)မြင့်မားစွာနှင့် အောင်မြင်တိုးတက်နေသောတိုင်းပြည်ကားမဟုတ်သေး။ စက်မှုမဆိုထားနှင့် လက်ရှိလက်မှုလယ်ယာကိုပင် လယ်သိမ်းခံ၊မြေသိမ်းခံနှင့် လယ်လုပ်သူလယ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုပင် အနိုင်နိုင်တောင်းဆိုနေရသေး၏။
နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများလည်း အတောမသတ်နိုင်။
ပင်အပ်မှသည် လေယာဉ်ပျံအထိ အလုံးစုံမျှကို ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းနေရကား တိုင်းပြည်တွင်ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေအကြီးအကျယ်ပြနေသလို နိုင်ငံတော်ကြီးမှာလည်း အကြွေးဝန်ပိလျှက်နေပါလေသည်။
သို့ဆိုသော် ယခုသုံးစွဲလည်ပါတ်ငွေများ အဘယ်ကလာသနည်း။ လူထုကလည်းအခွန်ငွေကိုအမှန်မဆောင်။ အစိုးရနှင့်သူ၏၀န်ထမ်းများကလည်း တာဝန်ယူမှုမရှိ၊ မိမိကိုယ်၌ကိုယ်က ၀င်ငွေအမှန်မပြနိုင်ဟူ၍ ခေါင်ကစမိုးယိုနေ၏။
တိုင်းပြည်သည် သယံဇာတရောင်းရငွေနှင့် ဘိန်း၊မူးယစ်ရောင်းဝင်ငွေတို့ဖြင့်သာ အဓိကလည်ပါတ်သုံးစွဲနေကြရသည်ဟု ပြောနိုင်လိမ့်မည်။
ထိုပစ္စခတ်အခြေအနေကြီးတွင် အခြားတပါးပြည်များကဲ့သို့ ဖေါ်မြူလာ၊စာအုပ်ကြီးအတိုင်းလုပ်သင့်သလော၊ ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင် အခြေခံလစာငွေတိုးပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စွမ်းနိုင်/မနိုင် နှစ်ကြိမ်ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
စင်စစ်နိုင်ငံရေး၏အရာတည်း။ ထိုနိုင်ငံ့အရေးကို နားလည်သူ တတ်ကျွမ်းသူ အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ရမည့်သူများမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများသာဖြစ်ရမည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဟူသည် မိမိအားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးပေးပါရန်လူထုအား အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုိုမှရွေးကောက်ခံဖြစ်လာသော လွှတ်တော်အမတ်သည် လူထုကအာဏာအပ်နှင်းလိုက်ပြီဖြစ်သော တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမည့်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပေသည်။
ယခု ၂၀၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်နေရာအားလုံးလိုလိုဝင်ပြိုင်နိုင်မည့်ပါတီကြီး၂ခုရှိရကား ပြည်ခိုင်ဖြိုး(UDP)သည် ယခင်/ယခုအာဏာရှိခဲ့သူ ရှိနေသူများဖြင့် အခြေခံဖွဲစည်းထား၍ ဦးနေ၀င်းတည်ထောင်ပေးခဲ့သော မဟနနှင့် ယခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဆေးပေးမီးယူလုပ်ထားသော မဘသတို့၏ ဘာသာရေးအင်အားကို ယူထားသည့်ပါတီကြီးဟုဆိုပါမည်။ ယခင်စစ်အစိုးရဖက်ကို ပင်းထားသော Hardliner များလည်းပါသည်။
ဘာသာရေးအခြေခံ၍ ငွေကြေးကြွယ်ဝအာဏာရှိသူများ၊ ခရိုနီအများစုများအင်အားဖြစ်ရကား ယူအက်စ်၏ GOP ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်ပါတီကဲ့သို့သဘောယူနိုင်သည်။ ညာဖက်ယိမ်းသည့် ကွန်ဆာဗေးတစ်များ၏ပါတီဟု သဘောထားပါစို့။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်(NLD)မှာ ယခင်က နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းများနှင့်သူ၏ဇာတိနွယ်များ၊ တပ်မတော်သားဟောင်းများ၊ တော်လှန်ပြောင်းလဲလိုသူ လစ်ဘရယ်အင်အားအများစုဖြင့်တည်ထားသဖြင့် ယူအက်စ်တွင် ဒီမိုကရက်ပါတီဖက်နှင့်သဏ္ဍန်တူဆိုပါစို့၊
ယူနီယံခေါ် သမဂ္ဂများ၊ အခြေခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ တတ်သိပညာရှင် အနုပညာရှင်များ၊ လွတ်လပ်တွေးခေါ်ရှင်များဘက် ယိမ်းကာစည်းရုံးသင့်လှသည်။ အခြေခံလူတန်းစား၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားဖက် ဦးတည်သင့်သည်။
ဤသို့ နိုင်ငံရေးဘယ်ညာ၂ဖက်ခွဲကာ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်၊ လက်စွဲမူထားလျှက် ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြခြင်းအားဖြင့် အပြန်အလှန်အတိုက်အခံပြုကြလျှက် လူထုကိုလည်း ၂ပိုင်းကွဲအောင် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ပညာပေးစည်းရုံး လမ်းပြဆောင်နိုင်ပါလျှင် တိုင်းပြည်ကြီး တဟုန်ထိုးတိုးတက်သွားမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကား ၃လကျော်သာလိုတော့သည်၊
မည်သည့်မူနှင့် မည်သို့သွားမည်ဟု ပါတီကြီး၂ခုလုံး ထင်ရှားမြင်သာကြေညာစည်းရုံးနေခြင်းမရှိ၊ အံ့ဖွယ်တည်း။
ယူအက်စ်၏ပါတီနိုင်ငံရေးသဘောသကန်ယူရပါလျှင် ယခုရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် လူထု၏ဆန္ဒအမှန်နှင့် သဘောထားအကြံများထွက်လာစေရန် အမေရိကား၏ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီမှ သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဲ့သို့သော အစွန်းနင်းပြောရဲပြောနိုင်သူထွက်လာသင့်ပေသည်။
ထရမ့်သည် အစိုးရအဖွဲ့တွင်မပါဖူး၊ နိုင်ငံရေးတာဝန်မယူထား၊ ဒေါ်လာဘီလီယန်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်နေကာ ရဲဝံ့ပြောင်နောက် အလွတ်ထောက်ပြရဲသောClownသဘောမျိုး လူစားဖြစ်သည်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည် မက်ဟီကိုအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာအစွန်းနင်းပြောချလိုက်သဖြင့် ဘယ်ဖက်နှင့်ညာဖက်စွန်းကပ်နေကြရသော ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးမဟာဗျူဟာတို့ အလယ်ဖက်ရွေ့ယူလာကြရသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဲ့သို့သော အသွင်ယူနိုင်မည့်လူတယောက်လိုနေသည်။
သို့မှသာ မြိုသိပ်ထားရသော လူထုသဘောထားအမှန်တို့ ပွင့်ပေါက်ထွက်လာအံ့ဟု ဟူလို။
ပုလဲ၊ သန္တာ၊ နီလာ၊ စိန်၊ကြောင်၊ ဂေါ်မုတ်၊ ဥဿဖုရား၊ ပတ္တမြား၊မြ ဟူသည့်န၀ရတ်ကိုးသွယ်သည် ကမ္ဘာတွင် မြန်မာ့မြေမှသာ မျက်စုံထွက်ပါသည်။
သဘာဝအားဖြင့် ရေဝေရေလဲကောင်းသော သစ်တောကြီးများ ရေစီးရေသန်သင့်သော မြစ်ကြီးများရှိခဲ့(ဖူး)သည်။
ကမ္ဘာတွင်စံထားရသော တွင်းထွက်ကျောက်မျက်နှင့် သယံဇာတများကို ကမ္ဘာ့အဆင့် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူများက ထိမ်းချုပ်ကိုင်၍ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဖေါ်ကာကျင့်နိုင်ကြပါလျှင် ယခုလက်ရှိတိုင်းပြည်ဝင်ငွေထက် အဆပေါင်းများစွာ တိုး၍ရနိုင်သည်မှာသေချာသည်။
အာဖရိကထွက် စိန်များကို ဂျူးလူများ၏ De Beersကဲ့သို့စိန်ကုမ္ပဏီများလုပ်ကြကိုင်ကြ စိန်ကိုကမ္ဘာတန်းဝင်အောင် မားကက်တင်းလုပ်မှုတို့ အတူယူသင့်သည်မဟုတ်ပါလော။
သို့ပြုနိုင်ကြသော် ပဋိပက္ခစုံအောက် ရင်း၍ထုတ်ကြရသော သွေးမျက်စုံကျောက်( Blood Gemstones) မဟုတ်တော့မူပဲ ရတနာအားဖြင့် ငွေကြေးထပ်၍ မွဲသူမရှိ ဖြစ်ပါလိမ့်။
လက်ရှိအဖြစ်ကို ဥပမာဆောင်ရသော် ကျွန်းသစ်လုံးများကို အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့ရောင်းချသည်။ ထို ပရိဘောဂသစ်ခွဲစက်များအတွက်စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ကို မြန်မာပြည်မှထောက်ပံ့ရောင်းချပြန်သည်။ လိုအပ်သောအလုပ်သမားအင်အားအဖြစ် မြန်မာများက မြန်မာပြည်ကိုစွန့်၍အဆိုပါစက်ရုံများတွင်အလုပ်သွားလုပ်ကြသည်။ ထွက်လာသောကုန်ချောများကို မြန်မာပြည်သားများက ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူသုံးစွဲကြပေသည်။ ထိုထိုကဲ့သို့  ဒို့အမျိုးသားတိုင်းပြည်ကြီးတည်း။
လူထုနှင့်တိုင်းပြည်ချမ်းသာလာကြပါလျှင် ပုံပြင်လာ ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားကဲ့သို့ လှူတန်းပေးကမ်းပစ်ကြမည်လော။
အလှူငွေတချပ်တပြားတိုင်း အကျိုးရှိမည့်နေရာကိုအကျိုးရှိအောင် စိစစ်ဝေဖန်လျှက် လှူတန်းသင့်လှပါသည်။ အလှူဒါနတိုင်း ကိုယ့်အတ္တကိုတိုင်တည်မလှူကြလင့်၊ သူ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ကာ လှူကြစေလိုသည်။ ဤတွင် ပညာ၏အရာသည် ပေါ်လာ၏။
ပညာ၏အခြေခံကား ပညာရေးတည်း။ ပညာရေးတိုးတက်ရန်မှာ ကျောင်းဆောက်သင့်သည်။ တက္ကသိုလ်တည်သင့်သည်။ ပညာရေးအတွက်ဘက်ဂျက်သုံးငွေကို ပုံအောသင့်သည်။ အလှူကို ပညာရေးတွင်အဓိကထားသုံးသင့်သည်။
မြန်မာတိုင်း နိုင်ငံကြီးသားစိတ်အပြည့်ဖြင့် အသိသညာသတိပညာကြွယ်ကြစေလိုပါသည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်သည် ဗုဒ္ဓကိုဖူးမျှော်လိုခြင်းဖြင့်စိတ်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိသော ရှင်ဝက္ကလိအား ဤသို့ဆိုဖူးသည်။
“ဤအပုပ်ကောင်ကို သင်ဖူးမြင်ခြင်းဖြင့် အဘယ် အကျိုးရှိမည်နည်း။ ၀က္ကလိ၊ တရားကိုမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မြင်သည်မည်၏။ ငါဘုရားကို မြင်သောသူသည် တရားကို မြင်သည်မည်၏ “ ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (သုံတ္တနိကာယ်၊ ခန္ဓသံယုတ်၊ ၀က္ကလိသုတ်)”
ပထမံဘိုးဘိုးအောင်သည် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း(ဘိုးတော်ဘုရား)အားဆုံးမသည့်အနေဖြင့် ၀လုံးအက္ခရာတခုရေးကာ ၁လုံးဖျက်လျှင် ၂လုံးပေါ်စေသည်။ သို့ဖြင့် နန်းတော်တိုင်များအားလုံးကို ၀လုံးလွှမ်းစေခဲ့သည်ဟူသတတ်။
တကယ်တော့ ၀၂လုံးဆင့်လျှင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ8 ရှစ်ဂဏန်းတည်း။
ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ရသေ့ကြီးမှာကား အဇ္ဇ-ဆိတ်နှင့် ဂေါဏ – နွားမျက်လုံးတပ် ပြဒါးအောင်ရသေ့ကြီးဖြစ်ကာ ပုဏ္ဏဂါမ၊ ပုဂံပြည်သည် သူ၏ပြဒါးစွမ်းဖြင့် မုဆိုးမပင်ဘုရားတည်နိုင်အောင်ချမ်းသာခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
“ပြဒါးသေ၍ တဆွေဝ၊ သံသေ၍တပြည်ဝ”ခဲ့သည်ဆိုရမည်။
ယခုခေတ်တွင် ပြဒါးဟူသည် မာကျူရီ(Hg) ဖြစ်ကာ ရွှေနှင့်ဓာတ်ပြုပျော်ဝင်နိုင်လျှက် ရွှေရိုင်းကိုတူးဖေါ်ကြသူများက ရွှေဖမ်းရာတွင်သုံးသော ခေတ်မမှီနည်းပညာ တခုဖြစ်မှန်းသိကြလေပြီ။
မည်သို့ဆိုစေ ပုဂံပြည်သည် ကသည်းပြည်၊ သီဟိုပြည်နှင့်ဂန္တလရာဇ်တိုင်းတို့၏ ကုန်သွယ်လမ်းပေါ်ထိုင်လျှက် ကုန်သွယ်ခွန်များဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သည်ဟုဆိုကြရမည်။
နဂါးနီသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် ဦးနုနှင့်ဦးထွန်းအေး စနေသား၂ယောက်တို့တည်ထောင်ခဲ့သော နဂါးနီစာအုပ်အသင်း၏မူလအမည်ဖြစ်ပါသည်။
စနေသားအထိမ်းအမှတ်”နဂါး”နှင့် ထိုစဉ်နှစ်များက လွှမ်းမိုးလှသော လက်ဝဲ”အနီ”စာပေများအားအကြောင်းပြု၍ နဂါးနီဟုတွင်၏။
နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး၏ အမြုတေတခုတည်း။
ယခု ၂၁ရာစုတွင်ကား အလိုရှိရာသတင်းနှင့်ပညာရပ်တို့ကို အင်တာနက်မှရယူ/ဖြန့်ဖြူးနိုင်ကြပြီ။
သတင်းစကားပြန့်ပွားလွန်လွန်းသဖြင့် ယခင်နှစ်၂၀ကအမေရိကသမ္မတ၏သတင်းရပိုင်ခွင့်အဆင့်ကိုပင် သာမန်အမေရိကန်တဦးက ပိုပိုသာသာရယူနိုင်စွမ်းရှိနေသောခေတ်ဖြစ်တည်း။
အင်တာနက်တွင် ၀က်ဘ်ဆိုက်တို့ပါသည်။ ဒစ်ဂျယ်တယ်စာအုပ်များအား လွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှစည်းရုံးဆွေးနွေးနိုင်သည်။
အင်တာနက်သည် “အ”အက္ခရာ တနင်္ဂနွေ “ဂဠုန်”ဖြစ်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အင်အားအကြီးဆုံးသည် “အပြာ”ရောင်သင်္ကေတနှင့် Facebook ဖြစ်သဖြင့်ဂဠုန်ပြာဟုသမုတ်မည်။
ယခုခေတ်တွင် တော်လှန်ရေးကြီးများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ လှုပ်ရှားမှုကြီးများ၊ နိုင်င့ရေး၊ပါတီစည်းရုံးမှုများကို အင်တာနက်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာအစွမ်းဖြင့်လုပ်နိုင်ကြပါပြီ။
မြန်မာများလည်း ၂၀၀၇ တွင် Chat Box သတင်းများပေးကာ Saffron Revolution သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေးကြီးအား ဦးခဲ့ ထူးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဂဠုန်ပြာတန်ခိုးဖြင့် အမျိုးဂုဏ်မြှင့်ကြပါစို့..။ ။
(ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ဘေးရန်ကာဆီးမည်
လူမွဲတွေက မနှေးခေတ်မီ သူဌေးဖြစ်တော့မည်)
( ဒို့နဂါးနီ သိဒ္ဓိတန်ခိုးနဲ့
ရွာထဲ .. Cj Card မလိုတော့ဘူး သဂျီး…
Cf Card တွေ နဲ့ အတော် အလုပ်ဖြစ်ေ်နကြဘီ ကြားတယ်..
(Cf) Copier of Facebook
ရမှာပဲ” ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးကို ခပ်ကင်းကင်း
ဂဠုန်ပြာ ရှီမရှိတော့ မသိဘူး
8888 အရေးအခင်းကာလမှာတော့ ဂဠုန်နီ ဆိုတဲ့ အဖွဲအစည့် တစ်ခု မန်းလေးမြို့ကို ထိန်းသိမ်းသွားဘူးတယ်
Watchadrop or mercury wrap itself up in some gold foil and dissolve it. Now you know why prospectors used mercury to purify gold.
ဟုတ်တာပေါ့ သူကြီး မင်း ရယ်။ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ အသားကျပြီး နိုင်ငံတွေ မှာပေါ့။
ဒါတောင် ဘယ်ပါတီ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် လေကြီး မိုးကြီး ပြောထားတာ တွေ က တကယ်လဲ အာဏာရ ရော လက်ယာ ကလဲ အလယ် ကို မသိ မသာတိုး၊ လက်ဝဲ ကလဲ အလယ် ကို မသိမသာ တိုး နဲ့ ဟိုလိုဒီလို ဖြစ်သွားနေတာ များတာပါဘဲ။
အခုလဲ အိုဘားမား က အီရတ် ကို ဖွင့် ပေးလိုက်တာ ကို ရီပါ့ဗလစ်ကန် တွေ က သူတို့ လက်ထဲ ပြန်ရောက်ချိန် အားလုံးပြန်ပြင်မယ် ကြိမ်းနေတာ မှတ်ထား။
တကယ် အာဏာရချိန် ပြောင်း မပြောင်း ကြည့်ရအောင်လို့။
ဒီလို နိုင်ငံ တွေ မှာလဲ မူ တွေ ပေါ်လစီ တွေ ချပြတာ ကို သိပ်မယုံကြပေမဲ့ လက်တွေ့ထဲ ပစ်စလက်ခတ် ကွဲ လွဲ နေလို့ သူတို့ ကို မယုံရင် နောက်တစ်ခါ Term ကျ ပြုတ်မှာပေါ့။
အဲဒီလို ဖြုတ်ဖို့ ကို စနစ်ကောင်း က ရှိနေပြီးသားပါ။
ကျွန်မ တို့ ဆီမှာတော့ အခုမှ လမ်းစလျှောက်ဖို့ ကြိုးစား နေရ တဲ့ ကလေး လို ဘဲ ရှိနေတော့ မူ ချဖို့ မပြော နဲ့ လူ တွေ ကို ငြိမ်အောင် စု နေရတာ နဲ့ အချိန် ကုန် ရော။
တကယ်တော့ အဲဒီ ပါတီကြီး နှစ် ခု က တီဗီ က နေ ပြည်သူ တွေ ရှေ့မှာ ဒီဘိတ် လုပ်ပြ ဖို့ သင့်တာ မဟုတ်လား။
ကျွန်မ တော့ ယုံပါတယ်။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆီမှာ မူဝါဒ တွေ ရှိနေပြီးနေမှာပါ။
. လေ နဲ့ ထုတ်ပြီပြဖို့ က ခက်တာ လိုက်လို့ သူကြီး ရယ်။
တကယ်လုပ်နိုင်ဖို့ သာ ချိန် ပြောရမှာ။
ကျွန်မ ကတော့ လက်ရှိအနေအထား အရ မူဝါဒ တွေ၊ ပေါ်လစီ တွေ ထက် “လူ” တွေ က ပိုပြီး အရေးကြီး နေသလားလို့။
စနစ် မကောင်း သေးချိန်မှာ လူကောင်း မထုတ်နိုင်ရင် ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ မူ ဖြစ်ဖြစ် အဖျားရှူး သွားမယ်။
ဂဠုန် ဆိုလို့ ရွာထဲ က garuda ကို တောင် သတိရနေမိတယ်။
လိုဂို တွေ မှာ အပြာရောင် သုံးတာက ဆိုရှယ် မီဒီယာ တွေ သုံးတာများသလားဘဲ။
Twitter နဲ့ Skype ကလဲ အပြာရောင်လေ။
(Viber ကျ ခရမ်း။)
ဂဇက် လဲ ပြာ တာ ဘဲ မဟုတ်လား။
. ဒေါင်း တောင်မှ အပြာ ဖြစ်နေရော ကို။